यसरी फेरियो जीवन – Rajdhani Daily
यसरी फेरियो जीवन
उद्योगले खटाएका केही प्राविधिकको सल्लाह र समयमा मलबीउ किन्न पाउने थोरै सुविधाका भरमा पर्साका किसानले व्यावसायिक रूपमा सुर्ती खेती गर्न थालेको एक दशक पनि कटेको छैन । तर, जिल्लाको उत्तरी भेगका किसानले यो नगदेबालीबाट मात्र अहिले वार्षिक साढे १८ करोड नगद बुझ्न थालेका छन् ।
आठ वर्षपहिले भने उनीहरू खेतबारीमा गाँजा खेती गरी ज्यानसँगै बाजी लगाउँथे । ‘कति त आफ्नै खेतबारीमा लगाएको नगदेबालीका कारण हालसम्मै जेलमा छन्,’ पर्साको विजयबस्ती कुपलाइनका किसान नापु लामाले विगत सम्झिँदै भने । किसानमा पहिले चेतनाको कमी र नगद साट्ने अरू भरपर्दो खेतीको अभाव पनि थियो । खेतबारीमा तरकारी खेती गर्दा पनि बजारसम्म लाने बाटोको समस्या थियो । त्यस्तै, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षबाट निस्कने जंगली जनावरले अरू खेतीमा क्षति पु¥याउँथ्यो । ‘गाँजा खेती गरे केही पैसाको मुख देख्न पाउने, सुक्खा मौसममा जताबाट हिँड्न मिल्ने र बेच्न पाइने भएर यहाँका किसान जोखिम नै मोलेर गाँजा खेती गर्थे,’ उनले भने ।
पाँचसात वर्षयता सुर्ती खेती गर्न इच्छुक किसानका लागि बारास्थित सूर्य नेपाल प्रालिले गाउँगाउँमा केही प्राविधिक खटाई किसानलाई सुझावसल्लाह दिने र खेतीका लागि समयमा मलबीउ दिन थालेपछि विजयबस्तीको मुहार फेरिएको हो । ‘फुसका घर हुनेले पक्का घर बनाउन थालेका छौं । छोराछोरीको बिहे र कहिलेकाहीँ बिरामी हुँदाको समस्या पनि यही खेतीको आम्दानीबाट गुजारा चलेको छ,’ पुरोहितसमेत रहेका लामाले भने ।
जंगली जनावरले पनि कुनै असर नगर्ने भएपछि अहिले गाउँका ९७ प्रतिशत किसानले नगदेबालीका रूपमा सुर्ती खेती गर्ने गरेको पर्साको ठोरी गाउँपालिका–५ सुवर्णपुरका अर्का किसान हरि चौलागाईंले बताए । ‘पर्साकै दक्षिणी भेगका किसानको जस्तो भुक्तानीका लागि कुनै तनाव हुँदैन,’ उनले भने । धान र मकैको सिजनमा मकै पनि लगाएर आम्दानीका लागि सुर्ती खेती गर्ने चलन पूरा गाउँमै बढ्यो । ‘राम्रो भएको छ । धेरै किसान अहिले खेती गर्दाको ऋणमा डुब्नुपरेको छैन । सुर्तीको बिक्रीले सानातिना सबै खर्च मिलाउन बल मिलेको छ,’ उनले थपे ।
ठोरी गाउँपालिका–४ विजयबस्ती, कुपलाइनका श्यामबहादुर श्रेष्ठ सुर्तीखेती गर्ने पर्साका ५ हजार ८६१ किसानमध्ये सबैभन्दा अब्बल किसान हुन् । उनले यो आर्थिक वर्षमा १० लाख बढीको आम्दानी गरेको बताए । सूर्य नेपालले उनीबाट सुर्ती र बिरुवा खरिद गर्दा १० लाख ४९ हजार ५९९ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको सूर्य नेपालका लिफ म्यानेजर माधव खनालले तथ्यांक देखाउँदै भने, ‘यो भुक्तानी श्रेष्ठले असोज, कात्तिक र माघमा गरी दुई सिजनमा लगाएको सुर्ती खेतीबाट भुक्तानी लिएका हुन् ।’
नगद आम्दानीका लागि आफ्नै खेतबारीमा लगाएको नगदेबालीका कारण विभिन्न झमेला झेल्न नपरेपछि यो खेतीतर्फ आकर्षण बढेको हो ।
सुर्ती खेती गर्न थालेको जम्मा ६ वर्ष भए पनि यसबीच कान्छी छोरीको बिहे गर्ने, घर बनाउने र छोरीको बिहेको २ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्ने जस्ता काम सुर्तीकै आम्दानीले गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । सुर्ती खेती गर्दा उत्कृष्ट किसान भएको भन्दै सूर्य नेपालले भारत आन्द्रप्रदेशमा थप ज्ञान हासिल गर्न बिनाखर्च पठाएपछि सुर्ती खेती गर्ने थप ज्ञान हासिल भयो ।
‘अरू खेती गर्दा छिमेकी मुलुक या विदेशतिर बालीनाली हेर्न जाने किसानलाई मौका त के ? आफ्नै सामान बिक्री गर्दा भुक्तानीसमेत पाइन्न । त्यहाँ गएर उताको सुर्ती खेती हेरेपछि उति नै क्षेत्रफलमा लगाएको खेतीबाट यो वर्ष झन्डै डेढ लाख बढी कमाउन सकें,’ उनले भने, ‘सुर्ती टिप्दा सबै एकैपटक नटिपी छिमल–छिमल गरी टिप्नुपर्ने रहेछ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा दुई बिघा जमिनमा सुर्ती खेती गरेका श्रेष्ठको आगामी वर्षमा तीन विघामा खेती गर्ने लक्ष्य छ ।
तरकारी खेती गरी बजार र जंगली जनावरको समस्या खेपेका श्रेष्ठजस्ता किसानका लागि अहिले सबै नगदेबालीको विकल्प सुर्ती खेती नै हो । उनलाई सुर्ती खेती गर्न सिकाउने स्थानीय किसान लामाले पनि यो खेती अझै छाडेका छैनन् । पुरोहित भएकाले आफूले पर्साका अरू किसानजस्तो कहिल्यै गाँजा खेती नगरेको बताउने लामा २० ⁄ २२ वर्षदेखि सुर्ती खेती गर्दै आएका छन् ।
‘छोराबुहारीको साथ नपाए पनि बूढाबूढी मिलेर १५ कट्ठा जग्गामासुर्ती खेती गर्दै आएको छु । १५ कट्ठामा वर्षमा ७५ हजार हुन्छ । एकमुष्ठ भुक्तानी पाइन्छ । हाम्रो खर्च चलिहाल्छ । यो क्षेत्रका लागि यो भन्दा अर्को नगदेबालीको विकल्प छैन,’ स्थानीय एक किसान भन्छन् ।
पछिल्लो समय राज्यले गाँजा खेतीप्रति कडाइ गरेपछि पर्साका किसानका लागि यसको विकल्पका रूपमा सुर्ती खेती दरिएको छ । भुक्तानीको रेट कम्पनीले पहिले नै तोकिदिने र बिक्रीका लागि अरू बजार खोज्ने झन्झट किसानलाई नभएको कम्पनीको दाबी छ । बिरुवा, मल, सुझाव दिने व्यक्ति सबै कम्पनीले नै उपलब्ध गराइदिन्छ । गाउँमै जेटीए खटाइदिएको छ । किसानलाई अरू के चाहियो ? भुक्तानीका लागि पनि १० ⁄ १२ दिनभन्दा कुर्नुपर्दैन । सूर्य नेपालले खातामै रकम जम्मा गरिदिन्छ । ‘सूर्य नेपाल कम्पनी पर्सा विजयबस्तीलगायत सूर्ती कृषकको समृद्धिका लागि वरदान नै भएको छ,’ विजयबस्तीकी लक्षुमाया बस्नेतले भनिन् ।
जिल्लाको सुवर्णपुर, निर्मलबस्ती, निचुटा, महादेवपट्टीलगायत जिल्लाको उत्तरी भेगका अधिकांश किसानका घरमा वर्षाका कारण सुर्ती सुकाउने ठाउँ छैन । त्यसैले घरको वरिपरि या अलग गोठ बनाएर त कतिले सूर्य नेपालले नै उपलब्ध गराएको त्रिपाल ओढाएरसमेत सुकाएका छन् । वर्षामा सुर्ती सुकाउन समस्या हुने भएकाले असोज–कात्तिकलाई ‘मुख्ये सिजन’का रूपमा लिने गरेको पर्साको सुवर्णपुरका किसान गणेश पौडेल बताउ“छन् ।
जिल्लाका दक्षिणी भेगका उखु किसानको जस्तो भुक्तानीका लागि कुनै तनाव नभएको, धानको सिजनमा धान र मकैको सिजनमा मकै लगाएर पनि आम्दानीका लागि सुर्ती खेती गर्ने चलन गाउँभर बढेको छ ।
सुर्ती बिक्रीले विवाह, पढाइ खर्च, बिमारीजस्ता खर्चका लागि ‘जोहो गर्न’ बल मिलेको छ । सक्नेले लगाउने र कमाउने नगदेबाली भनी पाँच सात वर्षपहिले मध्य तराईमा सनसनी मच्चाएको गाँजा खेतीको विकल्प सुर्ती खेती बनेको छ । वीरगन्जको चिनीमिल २०५९ सालमा कांग्रेस सरकारले बन्द गराएपछि उखु खेती गरी नगदेबालीबाट आर्थिक उपार्जन गर्दै आएका किसानले बाध्यतावश विकल्पमा गाँजा खेती गरेका थिए ।
‘सरकारले किसानलाई मलबीउ र सिँचाइ व्यवस्था गरिदिने हो भने बाँकी उत्पादन गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मा किसानलाई दिए हुन्छ,’ सुवर्णपुरका किसान भन्छन् । एउटा उद्योगले कच्चा पदार्थका रूपमा चाहिने सुर्ती खेती गर्न थोरै साथ दिँदा त ग्रामीण भेगका किसानको अवस्था अलि फेरिन थालेको छ भने सरकारले नै साथ दिए किसानले देशकै मुहार फेर्ने उनीहरूले विश्वास छ ।
कहाँ भित्रिन्छ साढे १८ करोड
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सुर्ती खेतीबाट जिल्लामा कूल १८ करोड ५० लाख भित्रिएको छ । सूर्य नेपालले स्वदेशी सुर्ती खरिद गर्ने बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासीमध्ये पर्साले सबैभन्दा बढी भुक्तानी लिने सूर्य नेपाल प्रालिका लिफ म्यानेजर माधव खनालले बताए । ‘यो रकम असोज–कात्तिकको सिजनको भुक्तानीको १३ करोड र माघतिर रोपेको सुर्तीको साढे ५ करोड गरी दुई सिजनमा कम्पनीले पर्साका किसानलाई भुक्तानी गरेको तथ्यांक हो,’ उनले भने ।
सूर्य नेपाललाई सुर्ती बेच्ने जिल्लाको कूल १ हजार ३७० हेक्टर जमिनमध्ये पर्सामा मात्र ९८० हेक्टर जमिनमा सुर्ती खेती हुने गरेको सूर्य नेपाल प्रालिका लिफ अफिसर तथा पर्सा इन्चार्ज जीवन नेपालले जानकारी दिए । नेपालमा खरिद गर्ने कूल २ हजार २० मेट्रिक टन सुर्तीमध्ये पर्साबाट मात्र १ हजार ५१८ मेट्रिक टन सुर्ती उत्पादन हुने गरेको छ । यसले पनि पर्साका किसान अन्यका तुलनामा सुर्ती खेतीमा अग्रस्थानमा देखिएको छ ।
किसानको सहजताका लागि २३ प्राविधिक
एचडीबीआरजी र बर्ली गरी कम्पनीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा दुई किसिमको सुर्ती चाहिन्छ । जुन नेपालबाटै खरिद गर्न सुर्ती किसानलाई कम्पनीले पहिल्यै मल, बीउ र विशेषज्ञसमेत उपलब्ध गराउ“छ । बजारसम्मको यातायात खर्च किसानले तिर्नुपर्दैन । सिकारु नपाएका किसानलाई कम्पनीबाट खटाइएका जेटीएले निगरानीमा राखी सुर्ती बिक्री नगरुन्जेल
सुझाव दिइराख्छन् ।
सूर्य नेपालले नेपाली किसानका लागि १८ जना जेटीए र ५ जना अधिकृत नियुक्त गरेको छ । ‘यो अरू खेतीजस्तो जाने पनि नजाने पनि किसानले मरिहत्ते गर्नुपर्दैन,’ कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रभाकर शाह भन्छन्, ‘किसानलाई प्लास्टिक, पीपी ओभन र हरियो जाली कर्जामा कट्ने गरी उपलब्ध गराइन्छ, कम्पनीलाई चाहिने कच्चा पदार्थ स्वदेशमा कति उत्पादन हुन्छ ? र बाहिरबाट कति मगाउनुपर्छ भनी कम्पनीले हरेक वर्ष कति किसानले सुर्ती खेती गर्दै छन् ? यहाँ कति जति उत्पादन हुन्छ ? कति हेक्टर जमिनमा खेती हुँदै छ भन्ने पहिले नै तथ्यांक राख्छ । त्यसबाहेकको सुर्ती बाहिरबाट मगाउनुको विकल्प छैन ।’
सूर्य नेपालका लागि आवश्यक सूर्तीको २० प्रतिशत मात्र नेपालमा उत्पादन हुन्छ । ‘बाँकी ८० प्रतिशत त विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने कम्पनीलाई बाध्यता छ,’ कम्पनीका लिफ म्यानेजर खनालले भने, ‘अरू सुर्ती नेपालमै उत्पादन भए आत्मनिर्भर बन्न प्रयासरत मुलुकका लागि सूर्य नेपाल थप सहायक बन्ने छ ।’
स्वरोजगार हुन चाहनेका लागि अवसर
बारा सिमरास्थित सूर्य नेपाल प्रालिलाई चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेमात्र पनि दैनिक बिदेसिने युवा संख्यामा केही कमी आउने अवस्था रहेछ । तथ्यांकअनुसार उसलाई चाहिने ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता नेपालमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न नसक्दाको परिणाम हो । ल
सूर्य नेपालले प्रत्यक्ष १ हजारलाई रोजगारी दिइरहे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा पर्साका १ हजार ३७० किसान लाभान्वित छन् । विदेशी भूमिमा ५० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा नेपाली काममा लादिएका छन् । यसको विकल्प अब मुलुकभित्रै खोजिनुपर्छ